ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရေးအတွက် အသက်ရှူစက် (၂၀) လာရောက်လှူဒါန်း - People Media Myanmar
Home ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရေးအတွက် အသက်ရှူစက် (၂၀) လာရောက်လှူဒါန်း
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရေးအတွက် အသက်ရှူစက် (၂၀) လာရောက်လှူဒါန်း
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ – ၂၇
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအတွက် ပါးစပ်နှင့် နှာ ခေါင်းစည်း (၂) သန်း၊ အပါအဝင် အသက်ရှူစက် ၂၀ အား နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ ပါတယ်။
အဆိုပါလှူဒါန်းမှုကို ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီအတွင်းရေးမှူး (၂)၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက နေပြည်တော်အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
အထက်ပါ လှူဒါန်းမှုတွင် ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (၂) သန်း၊ Fabric Face Mask (၁) သိန်း၊ N 95 Mask (၂) သောင်း၊ Googgle (၂) သောင်း၊ တစ်ကိုယ်ရေရောဂါကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ (PPE Set) (၂) သောင်း၊ Infrared temperature Manual Check (၅၀၀)၊ မျက်နှာအကာ (Face shield) (၂) သောင်း၊ အသက်ရှူစက် (Ventilator Machine for ICU set) (၂၀)၊ Patient monitor and accessory (၂၀)၊ ကလိုရင်းမှုန့် ပုံးပေါင်း (၅၀၀)၊ ရောဂါကာကွယ်ရေး ဘွတ်ဖိနပ် (၁,၀၀၀)နှင့် လက်ဆေးဆပ်ပြာရည် (၂,၀၀၀)တို့အား ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး H.E. Professor Mam Bunheng က ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း မဖြစ်မနေ တပ်ဆင်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုစီမံချက်ကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ လှူဒါန်းသည့် ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်းများ၊ မျက်နှာအကာများစသည်တို့ကို အသုံးချနိုင်ရန်အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ လှူဒါန်းမည့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကို လေကြောင်းလိုင်း အထူးလေယာဉ် (၃) စီးဖြင့် လာရောက် ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံမှ မွနျမာနိုငျငံကို ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျရေးအတှကျ အသကျရှူစကျ (၂၀) လာရောကျလှူဒါနျး
ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံအစိုးရက မွနျမာနိုငျငံ ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျ၊ ထိနျးခြုပျ၊ ကုသရေးအတှကျ ပါးစပျနှငျ့ နှာ ခေါငျးစညျး (၂) သနျး၊ အပါအဝငျ အသကျရှူစကျ ၂၀ အား နိုဝငျဘာ ၂၆ ရကျနကေ့ လာရောကျလှူဒါနျးခဲ့ ပါတယျ။
အဆိုပါလှူဒါနျးမှုကို ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျ၊ ထိနျးခြုပျ၊ ကုသရေးအမြိုးသားအဆငျ့ ဗဟိုကျောမတီအတှငျးရေးမှူး (၂)၊ ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာမွငျ့ထှေးက နပွေညျတျောအပွညျ ပွညျဆိုငျရာလဆေိပျမှ လကျခံခဲ့ပါတယျ။
အထကျပါ လှူဒါနျးမှုတှငျ ပါးစပျနှငျ့ နှာခေါငျးစညျး (၂) သနျး၊ Fabric Face Mask (၁) သိနျး၊ N 95 Mask (၂) သောငျး၊ Googgle (၂) သောငျး၊ တဈကိုယျရရေောဂါကာကှယျရေးဝတျစုံ (PPE Set) (၂) သောငျး၊ Infrared temperature Manual Check (၅၀၀)၊ မကျြနှာအကာ (Face shield) (၂) သောငျး၊ အသကျရှူစကျ (Ventilator Machine for ICU set) (၂၀)၊ Patient monitor and accessory (၂၀)၊ ကလိုရငျးမှုနျ့ ပုံးပေါငျး (၅၀၀)၊ ရောဂါကာကှယျရေး ဘှတျဖိနပျ (၁,၀၀၀)နှငျ့ လကျဆေးဆပျပွာရညျ (၂,၀၀၀)တို့အား ကမ်ဘောဒီးယား နိုငျငံ၊ ကနျြးမာရေးဝနျကွီး H.E. Professor Mam Bunheng က ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာမွငျ့ထှေးထံသို့ လှဲပွောငျးပေးခဲ့ပါတယျ။
လကျရှိတှငျ မွနျမာနိုငျငံ၌ တိုငျးဒသေကွီး/ ပွညျနယျမြားတှငျ ပါးစပျနှငျ့ နှာခေါငျးစညျး မဖွဈမနေ တပျဆငျရေး လူထုလှုပျရှားမှုစီမံခကျြကို အရှိနျအဟုနျဖွငျ့ဆောငျရှကျလကျြရှိရာ လှူဒါနျးသညျ့ ပါးစပျနှငျ့ နှာခေါငျးစညျးမြား၊ မကျြနှာအကာမြားစသညျတို့ကို အသုံးခနြိုငျရနျအတှကျလညျးဖွဈပါတယျ။
COVID-19 ကာကှယျ၊ ထိနျးခြုပျ၊ ကုသရေးလုပျငနျးမြားတှငျ အသုံးပွုနိုငျရနျအတှကျ ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံမှ လှူဒါနျးမညျ့ အထောကျအကူပွုပစ်စညျးမြားကို လကွေောငျးလိုငျး အထူးလယောဉျ (၃) စီးဖွငျ့ လာရောကျ ပို့ဆောငျခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။
« ပြည်တွင်းထုတ်ဗျူဟာမြောက်မြေပြင်မှမြေပြင်ပစ်ဒုံးကျည်ယူနစ် ၂၀၀ ကျော်ထုတ်လုပ်ရန်အစီအစဉ် တောင်ကိုရီးယားအတည်ပြု
မဲစာရင်းမပါသူ (၁၈) ဦးကို မဲပေးနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ကျိုက်မရော NLD ကိုယ်စားလှယ်ကို မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီမှ အမှုဖွင့် »